အဆိုပါ 23 ပစ်မှတ် guhem ဧပြီလ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး16 Bursaအဆိုပါ 23 ဧပြီလ guhem ပစ်မှတ်ထဲမှာ
11 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 16 Bursa, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
Gökmenလေကြောင်းလေကြောင်းလေ့ကျင့်ရေးစင်တာ (GUHE ငါ) မြို့တော်မြို့တော်ဝန် '' နှင့်အတူတူရကီရဲ့အာကာသ-ရေးရာပထမဦးဆုံးလေ့ကျင့်ရေးဧရိယာ '' 200 သူတို့ဧပြီလဝန်ဆောင်မှုဖွင့်လှစ်ရန်စီစဉ်ဆိုပါတယ် 23 သန်းစက်ရုံအကြောင်းကိုကုန်ကျမည်ဟုစုံစမ်းစစ်ဆေး Alinur Aktas အတွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
GUHE စီမံကိန်းကိုနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. စက်မှုလက်မှုနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၏ခေါင်းဆောင်မှုအောက်တွင်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, TUBITAK, စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး Bursa ကုန်သည်ကြီးများနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များထောက်ခံမှုနှင့်ညှိနှိုင်း (BCCI), ဧည့်သည်ကိုလက်မခံဖို့ရက်ပေါင်းရေတွက်။ ဥရောပအကြီးမားဆုံးပြီးစီးသောအခါ, Bursa သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ Center ကအနားမှာ, 13 500 အဆိုပါစီမံကိန်း GUHE ငါတထောင်စတုရန်းမီတာ, ပထမဦးဆုံး5ကမ္ဘာ့စက်ရုံအကြားဖြစ်လိမ့်မည်။ '' ကိုလည်းအခမ်းအနားတက်ရောက်ရန်မျှော်မှန်းထားသည်နိုင်ငံတော်သမ္မတအာဒိုဂန် '' ဖွင့်လှစ်ပွဲအခမ်းအနားသို့, ချက်ချင်းကုန်စည်ပြပွဲ 23 ဧပြီလ Sience ၏ပိတ်ပွဲပြီးနောက်ကျင်းပပါလိမ့်မည်။
မြို့တော်ဝန် Alinur Aktas, BCCI အီဘရာဟင် Burkay ၏ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ situ ထွက်သယ်ဆောင်အလုပ်ဆန်းစစ်, guhem နှင့်အတူစုဝေးရောက်လာကြ၏။ စီမံကိန်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအကဲဖြတ်ခဲ့သည်ခြင်းဖြင့် BCCI ဒုတိယသမ္မတ Cuneyt Sen နှင့်အဖွဲ့ဝင်ဘုတ်အဖွဲ့ Bursa သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ Center က Alparslan Şenocak (Bursa BTM) ၏ညှိနှိုင်းရေးမှူးဖာဟင် Ferric လည်းလိုက်ပါသွားအလည်အပတ်ခရီး, လာမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အဲဒီမှာဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။
မြို့တော်ဝန် Alinur Aktas, ယခု guhem တူရကီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကမ္ဘာမှအသိအမှတ်ပြုမထားဘူးပါလိမ့်မယ်ဟုပြောသည်တဲ့အခါမှသာလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ သာအာကာသနှင့်အာကာသအဖြစ် Center ကလာမယ့်ရက်ပေါင်းမြို့တော်ရဲ့အရေးအပါဆုံးခရီးသွားလုပ်ငန်းတန်ဖိုးကို Bursa လေကြောင်းအကယ်ဒမီသမ္မတ Aktas "အဆောက်အဦးကိုလည်းကွံတဦးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဓိကထားစီမံကိန်းသတ်မှတ်မှားပါလိမ့်မယ်။ အကျိုးစီးပွားသောဤအလုပ်သောကြောင့်ရူပါရုံကိုနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏သားသမီးတို့အဘို့ကြီးသောတန်ခိုးရှိနေခြင်း။ ကျနော်တို့မြင့်မားသောနည်းပညာနှင့်လေကြောင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်သိသာထင်ရှားသောဆက်ပြောသည်တန်ဖိုးကိုပေးနိုငျထင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောမျှော်လင့်ချက်တစ်နာရီ Bursa လေကြောင်းအကယ်ဒမီအဖြစ်လေယာဉ်၏အိပ်မက်တစ်သားသမီးရဲ့ပြခန်း, ခန္ဓာဗေဒ, လေယာဉ်, လေထဲတွင်အလင်းစမ်းသပ် setup ကို, လေထုထဲတွင်လေးလံစမ်းသပ် setup ကို, ဒုံးပျံ, အာကာသကြမ်းပြင်ပရိသဒေသများနှင့်တစ်ဦးလည်ပတ်မှုစနစ်အတွက်နေရာရှိသည်လိမ့်မယ်, "ဟုပြောသည်။ ငါရည်မှန်းချက်ကိုဦးတည်သည့်ရှေ့ပြေးဖြစ်လတံ့သောပြည်နယ်ကိုသမ္မတ Aktas ကြောင်းပို့ကုန်, စက်မှုဇုန်ဧရိယာကျော် 15, မော်တော်ကားနှင့် Bursa ၏အထည်အလိပ်ကဏ္ဍ၏စွမ်းဆောင်မှုနှင့်အတူများစွာသောရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ရှစ်လုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးဒုက္ခဂုဏ်သတင်းရှိခြင်း, ထက်ပို 21 ဒေါ်လာဘီလျံအသစ်တစ်ခုကိုရူပါရုံကိုများနှင့်အောင်မြင်မှုများဘို့လိုအပ်ကြောင်း, "GUHE ။ ယေဘုယျအားကျွန်တော်ဧပြီလ 23 ကိုယျ့ကိုယျကိုပစ်မှတ်၏အဖွင့်နေ့စွဲအဖြစ်ကလေးများနှင့်လူငယ်များအဘို့ကု သ. မရသောကြောင့်ဆုံးဖြတ်သည်။ ဧပြီလ Sience ကုန်စည်ပြပွဲအကြားရှိ 20-23 ။ ကျနော်တို့ Sience ကုန်စည်ပြပွဲဖွင့်ပိတ်ပွဲအတွက်ဒီမှာဆင်းသက်စီစဉ်ထားသည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်း၏အထူးသဖြင့်စတင်ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်လှစွာသောသမ္မတနှင့်အတူချင်တယ်။ Bursa နှင့်အမျိုးသားစီးပွားရေးပြီးသားမင်္ဂလာမင်္ဂလာရ, "ဟု၎င်းကပြောသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Aktas, အ guhem လည်း TUBITAK များ၏သဘောပေါက်အတွက်အာဏာပိုင်များမှထောက်ခံမှုထုတ်ချေးအားကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
BCCI ဥက္ကဋ္ဌအီဗရာဟင် Burkay အဆိုပါ 10 နှစ်ပေါင်းရဲ့အာကာသစင်တာ '' တူရကီစီးပွားရေးဖို့ဦးတည်ရာကိုဝင်ရောက်၏ညှနျကွားထဲမှာ projected ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး 2014 ဖြစ်ပါတယ် '' သူကသူတို့ကတည်းကနောက်တော်သို့လိုက်ကြပါပြီအရေးကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတဦးကပြောပါတယ်။ သူတို့တူရကီ၌တည်နေတဲ့အာကာသအေဂျင်စီဖြစ်စိတ်ကူးအဘယ်အရာကိုထွက်လာပါတယ်အဆိုပါစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအဆင့်စဉ်အတွင်း Burkay သင်သိသည့်အတိုင်းသူတို့သည်အလွန်မကြာသေးမီက ", ကရာအရပျကိုယူဆိုတဲ့အချက်ကိုတန်ဖိုးထား, တူရကီအာကာသအေဂျင်စီထူထောင်နိုင်ငံများကြားတွင်သူ၏နာမကိုရေးထိုးထားသည်ဟုဆိုသည်။ ကျနော်တို့နည်းပညာ၏မျိုးဆက်သစ်ဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်ပြန်တမ်းအဖြစ်ကိုငါ့ GUHE တင်ပို့မှုမှတစ်ဆင့်နှစ်ဦးစလုံးထုတ်လုပ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူပြုစေချင်တယ်။ ကမ္ဘာ၏အစိတ်အပိုင်းအတော်များများမှာတို့မှကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကဒီမှာရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်ဆိုင်သူများအကြားဝါရှင်တန်ရှိနည်းပြလေကြောင်းပြတိုက် Smithsonian ။ ဒီကနေဒါကုမ္ပဏီအပြင်တစ်ခုလုံးကိုအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းပုံဖော်ထားသည်။ ကြှနျုပျတို့သညျဤလက်ရာဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်ဖြည့်စွက်သည့်အခါမျှော်လင့်, လောကီသားလည်း "ပထမ5အတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု၎င်းကဆိုသည်။
BCCI ဥက္ကဋ္ဌ Burkay, ကို 'အကြောင်းအရာပေါများကြွယ်ဝအဖြစ်' 'Bursa ၏မြို့ guhem ကိုလည်းဖော်ပြထားတစ်ခုဗိသုကာရှိကြောင်းအထောက်အထားမှအထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကကမ္ဘာပေါ်မှာဖွဲ့စည်းပုံ၏ဤအမျိုးအစားမှသူတို့မြို့များ၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုရောင်ပြန်ဟပ်, Burkay သည့်ဗိသုကာနှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ဦးစလုံး ", guhem လည်း Bursa နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်၏ဤအသိကပြောပါတယ်, တူရကီဒီအနာဂတ်အတွက်ပုံဖော်သည်အရေးအပါဆုံးသောအရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပံ့သောဤသို့သောဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုစီမံကိန်းများကိုကျွန်မတို့ရဲ့ပထမဆုံးသမ္မတရဲ့နံပါတ်တစ်အပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်ဆိုင်သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချင်, "ဟု၎င်းကပြောသည်။
ဝန်ကြီးများတိကျခြင်း guhem ချီးမွမ်းခြင်း 03 / 12 / 2017 သိပ္ပံစက်မှုနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဒေါက်တာ Faruk Alinur Aktas တွေ့လေကြောင်းလေ့ကျင့်ရေးစင်တာ (GUHE ငါ) စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအတူဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် Hakan Cavusoglu နှင့် Bursa တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်Gökmen concise ။ ဝန်ကြီးများ concise, Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်နှင့် guhem လုပ်ပံ့ပိုးမှုများနှင့်အတူ TUBITAK နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် BCCI တူရကီရဲ့အနာဂတ်ပန်းတိုင်များကိုသင်္ကေတတစ်ခုစီမံကိန်းတစ်ခုကဆိုသည်။ သိပ္ပံစက်မှုနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဒေါက်တာ Faruk ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် Hakan Cavusoglu နှင့် Bursa တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Alinur Aktas, လေကြောင်းအတွက်Gökmenတွေ့ပညာရေးစင်တာ (GUHE ငါ) စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအတူ concise ။ ဝန်ကြီးများ, TÜBİTAK Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် BCCI concise ...
ဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးအာကာသ theme သင်တန်းကျောင်းအပြီးအစီးသည့် xnumx ရဲ့ရာခိုင်နှုန်း guhem 19 / 03 / 2018 ဆောက်လုပ်ဆဲ BCCI '' Gökmenစီမံကိန်း '' တို့ကလေကြောင်းများအတွက်တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးအာကာသ-ရေးရာစင်တာမှစတင်ခဲ့ခြင်းနှင့်အဆောက်အဦး၏လေကြောင်းလေ့ကျင့်ရေးစင်တာကိုGökmen '' တစ်ဝက်ပြီးစီးခဲ့သည်။ ပြီးစီးသည့်အခါသိပ္ပံ, စက်မှုနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနအ 80 GUHE ပထမဦးဆုံး5ပေးထောက်ခံမှုသန်းပေါင်ကမ္ဘာကြီး, ဥရောပအကောင်းဆုံးအာကာသ-ရေးရာစင်တာဖြစ်လိမ့်မည်။ BCCI သိပ္ပံ, စက်မှုနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန,, တူရကီသိပ္ပံနှင့်တူရကီ၏နည်းပညာတက္ကသိုလ်သုတေသနကောင်စီ (TUBITAK) ရှေ့ဆောင်ခြင်းနှင့် Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ငါ၏အ GUHE ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အာကာသ၏ 13 တထောင်စတုရန်းမီတာထောက်ခံပါတယ်, အာကာသနှင့်လေကြောင်း၏မျိုးဆက်သစ်အတွက်အကျိုးစီးပွားနှင့်အသိပညာတိုးပွားစေဖို့။ 80 သန်းပေါင်အတွက်အထောက်အပံ့လေကြောင်းနှင့်လေကြောင်းအပေါ်လေ့ကျင့်ရေး ...
ဧပြီလ 21 ပစ်မှတ်Akçarayအတွက် 30 / 12 / 2016 Akçarayပစ်မှတ် 21 ဧပြီလ: သင် Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်၏တရားဝင်က်ဘ်ဆိုက်ဝင်လျှင်ယနေ့ခေတ်, 500, အ NUMERIC အတွက်ရက်ပေါင်း "ဓါတ်ရထားပြက္ခဒိန်" ကိုချရေတွက်စီးပွားရေး၏အဆုံးစတင်, ဒါကြောင့်သင် Izmit လမ်းရထားထဲမှာအလုပ်လုပ် 30-35 ရက်ပေါင်းကျန်ကြွင်းသောမြင်လိမ့်မည်။ ဘတ်စ်ကားဘူတာအကြား Izmit Sekapark အတွက်အလုပ်ဟာလမ်းရထားပြေးမခံခဲ့ရစတင်ဖေဖော်ဝါရီလ32007 ပစ်မှတ်Akçarayဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမရကိုပြု၏။ အဘယ်ကြောင့်ဘာမှမဆိုလိုယင်းကိုပစ်မှတ်ထားအချိန်အတွက်မဟုတ်တော့ဆွေးနွေးငြင်းခုံအဆုံးသတ်မဟုတ်။ မြူနီစီပယ်မန်နေဂျာ "ဟုဇူလိုင်လအာဏာသိမ်းမှုကြိုးပမ်းမှု 15 1-2 လအတွင်းအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးပတ်ဝန်းကျင်အတွက်, အားလုံးအလုပ်တော့ဘူး။ အဆိုပါလမ်းရထားစီမံကိန်းကိုအတွက်နှောင့်နှေးများအတွက်အဓိကအကြောင်းပြချက်ကဒီကာလအတွင်းအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများ၏နှောင့်အယှက်ဖြစ်ပါတယ် "ဟုသူတို့ကပြောကြသည်။ ငါဇူလိုင်လ 15 နှောင့်နှေးဖို့အားလုံးကိုကြိုးစားမှုထင် ...
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: ဧပြီလ 11 1917 12 ဧပြီလဘက်ဒူဝင်လူမျိုးသူပုန်တိုက်ခိုက်မှုသံလမ်းနှင့်ပာ 2, 14 နှင့်အတူ ... 11 / 04 / 2015 11 ray, 1917 ခြေလျင်ရထားလမ်းပါဝင်သည်ဟုတိုက်ခိုက်မှုအုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူ 12 ဧပြီလ2hecinl နှင့် 14 အပိုင်းပိုင်း၏ 150 သွားလာလမ်းကြောင်းနှင့်အတူသမိုင်းယနေ့တွင် 50 ဧပြီလ 100 သူပုန်တွေဘက်ဒူဝင်လူမျိုးတိုက်ခိုက်မှုလူများ Hashim စန်းဘူတာမြို့ကိုဝိုင်းထားဧပြီ 16 အတွက် oldu.xnumx ဖျက်ဆီးတော်မူ၏။ ထိုနေ့တွင်ပင်, Müderricဘူတာတပ်စုတစ်စုဖြတ်တောက်တဲ့သစ်သားsaldırdı.xnumx 800 လူတွေဧပြီလချုံခိုတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်မိုးသည်းထန်စွာဆုံးရှုံးမှုခံစားခဲ့ရခဲ့သည်။
2014 119ဟိုတယ် LIFT သည်အထိArhızပစ်မှတ်ထား။ 19 / 03 / 2012 Arhız Karachay-Cherkessia ရဲ့ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုလမ်းကြောင်းအတွက်အားလပ်ရက်နှစ်ယောက်စကီးတောင်စောင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မနေ့ကကေဘယ်လ်ကားလမ်းကြောင်းArhızအပန်းဖြေစခန်းနှစ်ခုနှင်းလျှောစီးတောင်စောင်းများတွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အရှည် 860 မီတာ, cable ကိုကားတစ်စီး၏စွမ်းရည်တင်ဆောင်လာသောတစ်နာရီလျှင် 1800 လူများ, ခရီးသွားဧည့်အမြင့်အတွက် 1770 မီတာကိုဖယ်ရှားပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါနှင်းလျှောစီးတောင်စောင်းများ၏အလျားဖွင့်လှစ်နှစ်ခု 670 နှင့် 1100 မီတာဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ Sinara Group မှထိုအရပ်ကို၏ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်, ပထမဦးဆုံးArhızအားလပ်ရက်စင်တာ built ကွောငျးကုမ္ပဏီယေဘုယျဒါရိုက်တာ Dmitri Pumpyans သတင်းထောက်တွေကို, 700 ကလူငါးဦးကိုယခုနှစ်အတွင်းဟိုတယ်များ, စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦးများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုစင်တာနှစ်ခုကေဘယ်လ်ကားလမ်းကြောင်းနှင့် 6,5 ကီလိုမီတာရှည်လျားသောနှင်းလျှောစီးလမ်းဆောက်လုပ်ရေး၏ပြီးစီးရန်ကြေညာချက်တွင်ပြောကြားခဲ့့သည်က ...
ဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးအာကာသ theme သင်တန်းကျောင်းအပြီးအစီးသည့် xnumx ရဲ့ရာခိုင်နှုန်း guhem
ဧပြီလ 21 ပစ်မှတ်Akçarayအတွက်
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: ဧပြီလ 11 1917 12 ဧပြီလဘက်ဒူဝင်လူမျိုးသူပုန်တိုက်ခိုက်မှုသံလမ်းနှင့်ပာ 2, 14 နှင့်အတူ ...
2014 119ဟိုတယ် LIFT သည်အထိArhızပစ်မှတ်ထား။
ယူကရိန်း Maisonette Wagon ထုတ်လုပ်! ပစ်မှတ် 2013
အဆိုပါ 2026 အိုလံပစ်နှင်းလျှောစီးလိုရာခရီးအတွက်
နှစ်ဦးသန်းဧည့်သည်ပစ်မှတ်ဒီတစ်နှစ်တာ Erciyes နှင်းလျှောစီးစင်တာ (ဗီဒီယို)
holidaymakers ပစ်မှတ် 250 Kartalkaya ထောင်ပေါင်းများစွာ၏